लकडाउन बढे सँगै संन्चारकर्मी रबी लामीछानेको सरकारलाई प्रश्न :जनातालाई घरमा थु’नेर लाजनिती बाहेक के के योजना बने त? – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
लकडाउन बढे सँगै संन्चारकर्मी रबी लामीछानेको सरकारलाई प्रश्न :जनातालाई घरमा थु’नेर लाजनिती बाहेक के के योजना बने त?
काठमाण्डौं । लकडाउन थपेको थप्यै गर्ने तर कोरो’ना जोखिम कम गर्न आवश्यक काम भने सुस्त गतिमा अघि बढाउने सरकारी शैलीको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। लकडाउनको मोडालिटीबारेमै पुनःविचार हुनुपर्ने राय विज्ञहरुबाट आइरहेका बेला सरकारले बुधबार यही अवस्था अरु १० दिन लम्ब्याउने निर्णय लिएको छ।
राजनीतिक वृत्तमा प्रश्न बाक्लिएको छ के सरकार राजनीतिक विरोध छल्न लकडाउनको सहारा लिइरहेको छ ? उनीहरुको प्रश्नलाई स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरुको प्रश्नले पनि बल दिन्छ।
त्यस्तै गरेर विज्ञ लगायत विभिन्न ओ’होदाका व्यक्तित्वहरुले लकडाउन मात्र बढाएर हुन्न भन्ने क्रिया तथा प्रतिक्रिया दिदै आईरहेको पाईएको छ । सबैको मनमुटुमा बस्न सफल एक चर्चित एवम् कुशल सन्चारकर्मी रबी लामीछाने ज्यु ले पनि लकडाउन बढे सँगै दह्रो अनि खह्रो रुपले आफ्नो सामाजीक संन्जालमा यस्तो लेख्दै प्रतिक्रिया दिएका छन् :
“”लकडाउन बड्यो ठिकै छ तर बिपन्न बर्ग, साना ब्यवसायी, बैंक र सहकारीमा कर्जा लिएका तमाम मानिसहरुको बारेमा के छ योजना? टेस्टको दायरा खोइ बढेको?जनातालाई घरमा थुनेर लाजनिती बाहेक के के योजना बने त? कि सबैले प्रधानमन्त्रीको कविता बाटै चित्त बुझाउनु पर्ने हो। नालायक नेतृत्व !!!””
लामीछाने एक कुशल संन्चारकर्मी मात्र नभएर सबैको मनमुटुमा बस्न सफल एक सच्चा नायकको रुपमा स्थापीत भएका छन् । उनको समर्थकहरु धेरै नै छन् । पत्रकार दिपक बोहोराको उत्पादनमा न्युज -२४ नेपालबाट हरेक हप्ताको ३ दिन प्रशारण हुने अत्यन्तै चर्चित कार्यक्रम “सिधाकुरा जनतासँगको प्रस्तोता समेत हुन् रबिलामिछाने ।
लामीछानेको सत्कर्म र विचारहरुलाई पहिलाबाट नै निहाल्दै आएका कयौं सच्चा समर्थकहरुले उनलाई अब नेतृत्वमा आएर मुलुकको काँचुली फेर्नुपर्यो भन्ने सल्लाह एवम् सुझाव बारम्बार दिईरहेको पाईको छ तर उनको भने अहिले तत्कालै राजनितीमा प्रवेश नगर्ने निर्णय रहेको छ ।
Previous हामी उल्टो गर्छौ आ’लोचकलाइ स’त्रु बनाउछौ अनि चा’प्लुसिलाई मित्र त्यही बाट सुरु हुन्छ दुर्गती ✍️ रबिन ढकाल
Next भ्र*ष्ट नेतृत्वबाट केहीँ भएन अब सबैको ढुकढुकि रबी लामीछानेलाई नेतृत्वमा ल्याउन सबैले पहल गरौं ।